Igwe na-ekpochapụ ikuku na-ekpo ọkụ plasma kacha mma Onye nrụpụta na ụlọ ọrụ | Judphone
Igwe na-ekpochapụ ikuku na-ekpo ọkụ plasma dị ala
● Disinfection ikuku na-agbanwe agbanwe, nke ọma & na-arụ ọrụ
● mkpuchi zuru oke nke mpaghara nje: 80㎡
●Obere-okpomọkụ plasma dielectric mgbochi micro-ifufe & micro-arụpụta teknụzụ
● ọgwụgwọ ndị ọkachamara
Ụdị nhazi olu: Tinye olu nke oghere a ga-ekpochapụ, wee malite ya na otu igodo, usoro ahụ ga-ahazi otu oge nkwụsị na-akpaghị aka ma mee disinfection.
Ụdị nhazi oge: Tinye oge nkwụsịtụ, na usoro ahụ ga-eme disinfection dịka oge nkwụsị nke edoziri.
Ọnọdụ disinfection nke oge: Tọọ oge ịgba ọgwụ mgbochi tupu oge eruo, sistemụ ahụ ga-eme disinfection dị ka ọnọdụ disinfection preset siri dị mgbe oge a gachara.
Akuko disinfection: Enwere ike ibugo akụkọ mgbasa ozi na ọdụ ekwentị, yana oge mmalite na oge ngwụcha nke nje nwere ike jụọ ya site na akụkọ ahụ.
Ncheta enweghị ọgwụ nje: N'oge usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, mgbe ọgwụ na-efe efe dị ala karịa ebe nchekwa atomization, onye na-eme mkpọtụ mpaghara ga-ama jijiji ma bulite ozi ahụ na ọdụ ekwentị. N'otu oge ahụ, usoro ahụ ga-akwụsị disinfection na-akpaghị aka iji chebe modul atomization.
Usoro ọgwụgwọ disinfection: Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke 5L / H na ebe ịgba mmiri> 5 mita nwere ike nweta mmetụta disinfection na obere oge na nnukwu oghere.
● Mmekọrịta mmadụ na kọmputa
Mmekọrịta mpaghara: Ị nwere ike ịlele ozi nhazi disinfection na ọkwa usoro site na ịpị bọtịnụ iji kwado ihe ngosi ahụ.
Mmekọrịta dịpụrụ adịpụ: Ị nwere ike ịlele ozi nhazi ọgwụ nje yana ọkwa sistemụ site na ịtọọ ebe dị anya site na ekwentị mkpanaaka.
● Nhazi ọgụgụ isi
Nkewa akọrọ na mmiri: Nhazi modular dabara adaba maka ịgbakwụnye na igbapu ọgwụ nje ma na-enyere aka nrụnye na mmezi na-esote.
Atụmatụ agba ahaziri ahazi: Enwere ike ịgbanwe agba agba dịka ihe nkiri nke ndị ahịa si dị.
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ plasma na-acha ọcha maka ụlọ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọha
Obere ma dị arọ, nchebe gburugburu ebe obibi na-enweghị mmetọ
Ngwọta ikuku na-adịghị agbanwe agbanwe bụ usoro nke na-eji ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na plasma dị ala na teknụzụ ihicha iji nweta ikuku ime ụlọ dị mma, nke ziri ezi na nke ọma. Usoro ọgwụgwọ ọkwa ọkwa ọkachamara ahụike agaghị emetụta gburugburu ebe obibi na ọ gaghị emetụta ọrụ mmadụ. Plasma dị ala dị n'ime akụrụngwa na-emepụta ihe ndị akwụ ụgwọ: ihe na-arụ ọrụ oxygen na-arụ ọrụ dị ukwuu n'ime usoro igbu nje bacteria na nje virus, na-enwe mmetụta dị ukwuu nke ịmịnye nwa. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ike ime ka aerosol plankton na-arụ ọrụ na ikuku na nje bacteria na nje virus n'elu ihe, kamakwa n'ụzọ dị irè decompose formaldehyde na ihe na-agbanwe agbanwe organic ogige, na-eweda ụdị nile nke isi, sachaa ikuku gburugburu ebe obibi. Obere ozone dị ọcha nke ukwuu. Ngwaahịa a bụ nke na-arụsi ọrụ ike ikuku disinfection pụrụ iche akụrụngwa, na irè nso ike nweta ọ dịghị nwụrụ anwụ nkuku nke zuru nso nke disinfection na dị ọcha ime ụlọ ikuku gburugburu. Mgbe ejiri ya mee ihe nke ọma, ọ gaghị ebute nnukwu mmerụ ahụ n'ahụ mmadụ, ọ gaghịkwa ebute mmetọ nke abụọ na gburugburu ebe obibi. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ n'oge na nke ọma n'igbochi mgbasa na mgbasa nke ọrịa na-efe efe na ndị mmadụ.
1.Indoor ike ikuku na elu disinfection na ihicha
2.Real-time disinfection technology nke na-adịghị emerụ ma ọ bụ nnyonye anya ndị mmadụ na ime ụlọ ohere gburugburu ebe obibi.
3.Ngwaahịa na-eji usoro disinfection na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ nke na-enweghị nnyonye anya na-emerụ ahụ na gburugburu ebe obibi na ndị mmadụ.
4.The ngwaahịa adopts ala-okpomọkụ plasma dielectric mgbochi micro-iputa technology na micro-emepụta teknụzụ.
5.Ozone ọcha na compound disinfection ihe nweta mma na ịrụ ọrụ disinfection.
6.N'ụzọ dị irè deodorize ma kpochapụ isi na-adịghị mma na ikuku
7.Adabara ebe bụ nnukwu, 80㎡
Cheta na: Ejila n'ụlọ ma ọ bụ na obere oghere maka ihe karịrị awa 6 na etiti oge nke awa 2; enwere ike iji ya na-aga n'ihu na gburugburu ọha ebe igwe mmadụ na-asọba. Ngwaahịa arụnyere n'elu ụlọ ma ọ bụ mgbidi dị ka o kwere mee site na ala 1.8 mita dị elu. N'ihi mgbasa ion dị arọ na-agbada, nrụnye dị elu ga-adị mma ma dị irè karị
Voltaji: AC 100-240V Ike kachasị: 6W Arọ: 0.8kg
Nha ngwaahịa: 190*190*50mm mkpọtụ: 26db Okpomọkụ: 0 ~ 40 Celsius
iru mmiri: Ruo 95% RH Mpaghara ọdabara: 80 Mgbakọta oriri ike: 5W
Ọrụ: Jiri bọtịnụ mgba ọkụ na ngwaọrụ rụọ ọrụ ozugbo. Pịa otu ugboro ka ịgbanwuo, wee pịa ọzọ ka gbanyụọ.
Ezinụlọ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọha na eze, na gburugburu ebe pụrụ iche, dị ka ụlọ ọgwụ, ụlọ mposi na ebe mmetọ ndị ọzọ dị njọ, nwere ike ịbawanye ojiji.
Nke gara aga: JA-1806 Smart Wifi Hepa Air Purifier nwere H14 Ezi HEPA Filter, Ruo 70㎡ nnukwu ọnụ ụlọ
Osote: Sịntetik Fiber Flat Panel Filter